Hawaasti Oromoo Toronto Irreecha kabajatan; wareegamtoota Irreechaas yaadatan – Oromedia
Home » Oduu » Hawaasti Oromoo Toronto Irreecha kabajatan; wareegamtoota Irreechaas yaadatan
(Oromedia, 5 Fulbaana 2017) Hawaasni Oromoo Toroontoo Fulbaana 2 bara 2017 ayyaana Irreechaa kabajatan; #YaadannooDhumaatiiIrreechaas gamtaan gaggeessan.
Hawaasti Oromo magaalaa Tornoto fi naannoo san jiraatan Ayyaana Irreechaa kana irratti argamuun sirna galateeffannaa bifa hoo’aa fi qindaa’aan gaggeeffatanii jiru.
Irreecha Torontoo kan bara 2017 kanarratti sirna Yaadannoo Ajjeechaa fi Dhumaatii ilmaan Oromoo kan bardheengaddaa (Irreecha Arsadii, Bishooftuu, 2016) gaggeeffameera.
Odeessi nu gahe akka ibsutti, uummatni ayyaana kanaaf yaa’ee huccuu adii akka sabbataatti tolchame mataatti hidhatee, huccuu diimaa immoo harka mirgaatti hidhatee bahe.
Akkasumas margaa fi daraaraa keelloo irreeffachuudhaaf harkatti qabatanii akka argaman beekameera.
Akka aadaa Oromoo ganamaatti halluun Gurraachi, Diimaa fi Adiin hiikkaa mataa isaanii qaba. Halluun Gurraachi waan egeree fi hin beekamne kan ibsu waan ta’eef, mallattoo ulfinaa, Uumaa fi iccitii walaabuu ti. Halluun Diimaa immoo waan har’aa fi warraaqaa waan ta’eef mallattoo jireenya, wareegamaa fi irbuu dha. Adiin immoo wan darbe kan ibsu, mallattoo yaadannoo fi seenaa ti. Akka aadaa kanatti, adiin kaleessa’ diimaan har’a; gurraacchi immoo boru!!
Previous: ABOn KS 4ffaa milkiin xumurate; HD fi HD Ittaanaas filachuun ibsa ejjannoo baafate.
Next: Murtiilee fi Kutannoolee Teessuma GS-ABO 1ffaa – Fulbaana 3, 2017